Fanandramana momba ny siansa Fluorescent Light
Science Asa ho an'ny ankizy
Manaova mofomamy misy fluorescent tsy ao an-trano
Fantaro ny fomba hanaovana ny famirapiratana mamiratra tsy mitsahatra raha tsy mampiditra azy io! Ireo fanandramana momba ny siansa dia mampiseho ny fomba famokarana herinaratra herinaratra, izay manazava ny fiakaran'ny fôsfôla, ka mahatonga ny jirony hamiratra.
Fitaovana fanandramana hazavana
Ny labozia maneno (ny tavoahangy dia miasa tsara indrindra. Tsara raha masaka ny hazavana.)
toeran'ny tatitra plastika
biby volom-borona na fo
Ny hazavana manify dia mila maina tanteraka, noho izany dia azonao atao ny manadio ny girany amin'ny kitapo maina alohan'ny hanombohana. Hazava kokoa aminao ny andro mafana raha oharina amin'ny haavo matevina.
Ny zavatra rehetra ilainao hatao dia ny mibontsina ny jiro mivantana amin'ny plastika, ny lamba, ny felatanana, na ny baolina. Aza mampihatra tsindry. Mila fiatoana ianao mba hanao ny tetikasa; Tsy mila manosotra ilay fitaovana ianao ao anatin'ilay loko. Aza manantena fa ho maivamaivana ny jiro raha hiditra ao amin'ny fivoahana. Manampy ny manala ny jiro mba hahitana ny vokany.
Avereno averina amin'ny zavatra hafa ao amin'ilay lisitra ny fanandramana. Andramo fitaovana hafa hita ao an-trano, na any am-pianarana, na any amin'ny laboratoara. Iza no manao ny tsara indrindra? Inona no fitaovana tsy miasa?
Ahoana no anaovana azy?
Ny fikikisana ny fantsom-bokatra dia mamorona herinaratra. Na dia kely aza ny herin'ny herinaratra noho ny habetsaky ny herinaratra omena ny rindrina, dia ampy ny mamelona ny atôma ao anaty tavoahangy, ka manova azy ireo avy amin'ny fanjakana ho any amin'ny fanjakana mientanentana.
Ireo atôsitra mientanentana dia mamoaka photons rehefa miverina amin'ny toetry ny tany izy ireo. Ity dia ny fluorescence . Amin'ny ankapobeny, ireo fotony ireo dia ao anatin'ny faran'ny ultraviolet, noho izany dia misy biriky ny fluorescent misy bodofotsy ao anatiny izay manangona ny hazavana UV ary mamoaka angovo ao amin'ny hazavana hita maso.
Mora tapaka ny lokon'ireo hazavana manify, manamboatra balsama maranitra ary mamoaka vovoka poizina misy poizina.
Aza midina be loatra amin'ny tsindry amin'ny lamosina. Mitebiteby ny loza, raha toa ianao ka manaisotra kibay na miloko iray, dia asio plastika misy plastika, ary ampiasao amim-pitandremana ny kitapo matevina mba hanangonana ny singa rehetra sy ny vovoka, ary hametrahana ny fonon-tanana sy ny fitaratra voapetraka ao anaty kitapo plastika. Ny toerana sasany dia manana tranokala manokana ho an'ny raboka amin'ny ratra, ka jereo raha misy / misy ilaina alohan'ny hametrahana ilay jiro ao anaty fako. Sasao amin'ny savony sy ny rano ny tananao aorian'ny fikarakarana ny tavoahangy ravana.
Ahoana ny fomba hamonoana bibikely
Fanandramana momba ny siansa any am-pianarana
Dihy fanta-daza Ghost Science Trick
Ahoana ny fomba hanamboarana savony menamena
Ahoana no hanehoana ireo hafatra tsy hita maso?
Tetik'asa momba ny siansa momba ny Sakafo Sakafo Faha-roapolo
Ny tetikasan'ny tetikasa Fair Fair Science Fair
Tari-dàlana ho an'ny ankizy mba hahatonga anao ho mpikaroka metaly
Photosynthesis Search Word Puzzle
Azonao Atao Ihany ve ny Equinox?
Fanandramana momba ny siansa any amin'ny Sekoly ambony
Joan of England, mpanjakavavin'i Sicily
Fiteny anglisy (conlang)
Ahoana no hikolokolo amin'ny lanezy
Fanomezana maimaimpoana maherin'ny $ 25
Ahitsio ny plastika
Ireo anarana ao amin'ny Satanic Infernal
Fanomanana toerana - Ao / Am / On / On / Out of
Misy anarana 200 mahery an'i Jesoa Kristy
Ny adiresy momba ny Oniversiten'i Western New Mexico
Ny Ghisli tsara indrindra no noforonina
Pratt Institute GPA, SAT sy ACT Data
The Symbolism of the hay
Ahoana no holaza raha manana nomerao ny corvette - ny Corvettes 1960-1996
Mpitsoa-ponenana tsy ara-dalàna sy mpifindra monina tsy ara-dalàna
Ny ankamaroan'ny tranonkala malaza dia mihodina amin'ny fotoana rehetra
Ny fandresen'i Roma voalohany sy faharoa
Fomba hisafidianana dobo filomanosana
The Beatles '"Omaly"
Tanàn-dehibe ao Shina